21st Anniversary Message | Access Spectrum
အခုဆိုရငျ Access Spectrum တညျထောငျခဲ့တာ ၂၁ နှဈ ရှိသှားပါပွီ။ ဒီ၂၁နှဈအတှငျးမှာ စီးပှါးရေး နဲ့ အိုငျတီလုပျငနျးတှေ နိမျ့မွငျ့တကျကြ အခွအေနတှေေ အမြိုးမြိုးကိုကွုံတှခေဲ့ရပွီး အခွအေနေ ကောငျးတဲ့ ရကျတှလေဲ ရှိခဲ့သလို သိပျမကောငျးတဲ့ ရကျတှလေဲ ရှိခဲ့ပါတယျ။
အိုငျတီနညျးပညာ အထောကျအကူနဲ့ မိမိပတျဝနျးကငျြ အသိုငျးအဝိုငျးကလူတှရေဲ့ ဘဝကို ပိုမိုကောငျးစတေဲ့ တိုးတကျမှုအပွောငျးအလဲတှကေို လုပျပေးနိုငျခဲ့တာတှကေို ပွနျတှေးမိတဲ့အခါတိုငျး ဝမျးသာကွညျနူးရပါတယျ။
ဒီလို လုပျပေးခှငျ့ရလို့လဲ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကုမ်ပဏီအဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့ မိသားစုမြား၊ ဝယျယူအားပေးကွသူမြား၊ စီးပှါးရေး မိတျဖကျမြား နဲ့ အိုငျတီလုပျငနျးထဲမှ ကုမ်ပဏီမြားကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ဒဈဂဈြတယျ စနဈသို့ ကူးပွောငျးခွငျး ခရီးလမျးမှာ တညျထှငျဆနျးသဈမှုတှနေဲ့ အတူပူးပေါငျးပါဝငျကူညီနိုငျဖို့ အစဉျတစိုကျ ကွိုးစားအားထုတျ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။
အခုဆိုရင် Access Spectrum တည်ထောင်ခဲ့တာ ၂၁ နှစ် ရှိသွားပါပြီ။ ဒီ၂၁နှစ်အတွင်းမှာ စီးပွါးရေး နဲ့ အိုင်တီလုပ်ငန်းတွေ နိမ့်မြင့်တက်ကျ အခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အခြေအနေ ကောင်းတဲ့ ရက်တွေလဲ ရှိခဲ့သလို သိပ်မကောင်းတဲ့ ရက်တွေလဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အိုင်တီနည်းပညာ အထောက်အကူနဲ့ မိမိပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေရဲ့ ဘဝကို ပိုမိုကောင်းစေတဲ့ တိုးတက်မှုအပြောင်းအလဲတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်တွေးမိတဲ့အခါတိုင်း ဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ပေးခွင့်ရလို့လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် မိသားစုများ၊ ဝယ်ယူအားပေးကြသူများ၊ စီးပွါးရေး မိတ်ဖက်များ နဲ့ အိုင်တီလုပ်ငန်းထဲမှ ကုမ္ပဏီများကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း ခရီးလမ်းမှာ တည်ထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ အတူပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားအားထုတ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
It has been 21 years since we started Access Spectrum. We have experienced the ups and downs of the economy and the industry in Myanmar. There were good days and not-so-good days!
Thinking back over the moments where we madeapositive difference in our stakeholders’ lives with technology, I feel very satisfied and happy.
We have worked together and continue to evolve to stay innovative and help you in the journey of digital transformation.